Somaliland oo Xusaysa Sanadguuradii 28aad ee Gooni Isutaagooda- SAWIRRO • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Somaliland oo Xusaysa Sanadguuradii 28aad ee Gooni Isutaagooda- SAWIRRO
Somaliland oo Xusaysa Sanadguuradii 28aad ee Gooni Isutaagooda- SAWIRRO
Munaasabad ballaaran oo lagu xusayo sanadguruadii 30aad ee ka soo wareegtay markii goboladda Waqooyi ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqeen inay gooni isaga taageen Soomaaliya inteeda kale, `18ka May 1991dii.
Munaasabada ugu weyn oo ka dhacaysaa Caasimadda Hargaysa waxaa ka qaybgalaya Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, Madaxda labada gollayaasha Barlamaanka iyo odoyaasha, madaxda xisbiyada mucaraadka qaarkod iyo dadweyne farabadan.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi oo khudbad ka jeediyay munaasabada waxaa uu kaga hadlay horumarka ay Somaliland gaartay mudadii ay gooni-isutaagtay, waxaa kaloo uu ka hadlay maalgalinta shisheeye, isagoo soo hadal qaaday shirkadda DP World oo uu sheegay in ay Caymis la’aan maalgaliyeen Somaliland. Ciidamada Somaliland ayuu ku amaanay kaalinta ay kaga jiraan difaaca, la dagaalanka waxa uu ugu yeeray cadowga iyo nabadaynta.
Wuxuu ka hadlay arrimaha doorashooyinka gollaha wakiiladda Somaliland. waxaa uu ka codsaday Xisbiga Wadani inuu ka qaybgalo doorashadaasi.
Wuxuu ka hadlay wadahadalada Dowladda federaalka iyo Maamulka Somaliland, oo uu sheegay in beesha Caalamku ay maanta aqoonsantahay in la gaaray waqtigii la kala guri lahaa labada dowladood, waa sida uu hadalka uu dhigay.